एप्पलद्वारा आइफोनका चार नयाँ मोडल लन्च Setokhari ::. News Portal
आईतबार, कात्तिक १६, २०७७ ०४:१३:५८
गृहपृष्ठ . अर्थ
नेपालगन्ज : अमेरिकी टेक कम्पनी एप्पलले आइफोन १२ सिरिज लन्च गर्दै चार नयाँ मोडल बजारमा ल्याएको छ । एप्पलले मंगलबार ‘डिजिटल इभेन्ट’ यसको घोषणा गरेको हो । एप्पलले आइफोन १२ का ह्यान्डसेट फाइभ जी नेटवर्कले सज्जित हुने पनि पुष्टि गरेको छ ।
एप्पल प्रमुख टिम कुकले भने,‘हामी आइफोनको आफ्नो पूरै लाइनअपमा फाइभ जी ल्याउँदै छौं । यो आइफोनका लागि नयाँ युगको सुरुवात हो ।’ एप्पलले आइफोन १२ (६४, १२८, २५६ जीबी स्टोरेज), आइफोन १२: मिनी (६४, १२८ र २५६ जीबी स्टोरेज) का साथै आइफोन १२ प्रो (१२८, २५६ र ५१२ जीबी स्टोरेज), आइफोन १२ प्रो म्याक्स (१२८, २५६ र ५१२ जीबी स्टोरेज) लन्च गरेको छ । यी मोबाइल फोनको मूल्य झन्ण्डै ७० हजारदेखि एक लाख ३० हजार भारतीय रुपैयाँको बीचमा छ ।
त्यस्तै ५१२ जीबी स्टोरेज भएको आइफोन १२ प्रो म्याक्सको मूल्य एक लाख ५९ हजार नौ सय रुपैयाँ हुनेछ । आइफोन १२ मिनी फाइभ जी प्रविधियुक्त विश्वको सबैभन्दा सानो फोन हो ।
विश्वभर आइफोन १२ मिनीका लागि प्रि–अर्डर नोभेम्बर ६ बाट सुरु हुनेछ भने नोभेम्बर १३ बाट उपलब्ध हुनेछ । आइफोन १२ र आइफोन १२ प्रोको प्रि–अर्डर अक्टोबर १६ बाट सुरु हुने भने अक्टोबर २३ बाट पाइनेछ । यस्तै आइफोन १२ प्रो म्याक्सको प्रि–अर्डर नोभेम्बर १३ बाट सुरु भएर नोभेम्बर २० बाट बिक्री सुरु हुनेछ ।
आन्तरिक पर्यटन पुनरुत्थान समिति लुम्बिनीको सहसंयोजकमा सिग्देल
प्रचण्डले खोले कालिज रेष्टुरेन्ट